Tokony handahatra tapakila mankany Marrakesh izao ny mpikambana UNWTO? Tsia !!!
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Tokony handahatra tapakila mankany Marrakesh izao ny mpikambana UNWTO? Tsia !!!
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao farany momba an'i Maraoka • Vaovao • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
UNWTO sy ny minisitry ny fizahantany avy amin'ny firenena mihoatra ny 100 dia eo am-panaovana tapakila hividianana tapakila hanatrehana ny fivoriambe faha-24 an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany.
Raha ny angom-baovao voaray avy ao anatin'ny fitantanan'ny UNWTO dia tsy ilaina ny tapakila, afa-tsy ny fifandraisana amin'ny solosaina sy Internet tsara hanatrehana ny hetsika.
The Fivoriambe faha-24 an'ny fikambanana fizahan-tany manerantany (UNWTO) dia kasaina hatao ny 30 Novambra ka hatramin'ny 3 Desambra ao Marakesh, Maroc.
eTurboNews naminavina ny fanemorana ny fivoriambe amin'ny volana jolay. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nanjary zava-misy io faminaniana io rehefa nataon'ny UNWTO ho ofisialy ireo daty vaovao.
Ireo loharanom-baovao marobe ao anatin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany dia manondro drafitra hafa mety hisy amin'izao fotoana izao.
Na ireo mpandeha vita vaksiny tanteraka any Maraoka aza dia ampitandreman'ny governemanta, ao anatin'izany i Etazonia mba hisorohana ny fandehanana any amin'ny fanjakan'i Maraoka noho ny fiakaran'ny karazana Delta an'ny Coronavirus.
Ny rafi-pitsaboana any Maraoka dia tsy ampy fitaovana hitsaboana fitomboan'ny tranga COVID-19, ary ny fanaovana ny General Assembly ao amin'ity firenena Afrikanina Avaratra ity dia mety ho tonga delestazy atahorana avy amin'ny firenena 160 tsy te handray.
Mbola mitohy ny fanomanana amin'ny fomba ofisialy an'ity hetsika lehibe ity, saingy misy loharanom-baovao marobe ao amin'ny foiben'ny UNWTO any Madrid izay nanao sonia eTurboNews fa ny fanomanana fivoriamben'ny jeneraly virtoaly voalohany dia voavoatra amin'izao fotoana izao.
Antenaina fa tsy hanambara izany fanovana izany raha tsy amin'ny minitra farany ary mety misy antony ara-tetika tena feno fitiavan-tena ataon'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO eTurboNews manadihady amin'izao fotoana izao.
Toy ny mahazatra, eTurboNews nanandrana nahazo fanamarinana mivantana avy amin'ny UNWTO.
Mampalahelo fa lasa mpihetsiketsiky ny fikambanana iray tantanan'ny tahotra, fandrahonana ary fanerena ny mpitantana ny serasera UNWTO Marcelo Risi ary ny fifandraisana malalaka dia ampahany amin'ny talen'ny fifandraisana tsy mahazo manao.
Manantena ny hanarenana ny dia amin'ny...